5 Dhacdo oo kamid ah kuwii ugu yaabka badnaa ee aduunka ka dhaco. | Radio Danan 94.0 MhZ
Faalooyin 5 Dhacdo oo kamid ah kuwii ugu yaabka badnaa ee aduunka ka...
5 Dhacdo oo kamid ah kuwii ugu yaabka badnaa ee aduunka ka dhaco.
1. Harold Edward Holt oo soo noqday Ra’iisul wasaarahii dalka #Australia sanadihii 1966 – 1967 ayaa lawaayay mar qura isagoo sanad xilka haya xilli uu ku dawaalanayay badda, ilaa maantana lama helin meydkiisa.
2. Kahor dagaalkiiii labaad ee Aduunka ciidamada Badda ee dalka #ROMANIA looma soo xiri jirin tababarka marka ay dhamaystaan ilaa hal qof oo guutada kamid ah uu u dhinto tababarka adag una dul qaadan waayo, hadii aan qof dhimanin guutadaas looma soo xiro tababrka ilaa dhimasho laga helaa, waxana taas ka yaab badnayd iyagoo og ayay ciidanku qoran jireen geesinimadood. Caadadaas ayaa hadda lajoojiyay.
3.waxa jiray Diiq loogu magac darray Miracle Mike, kaas oo inta Muslim ah aamintay in uu ahaa Mucjiso rabaani ah, halka dadka diimaha kle haysta ay buugaagtooda layaabka ku dareen. Diiqaan ayaa noolaa 18 Bilood isagoon madax lahayn oo madaxa laga jaray intii u dhaxaysay 1945 ilaa 1947, waxaana Diiqaasi lahaa nin lagu magacaabi jiray Lloyd Olsen.
4. Wariye lagu magacaabo Enki Bracaj, oo ah haweeneey 21 jir ah ayaa T.V laga leeyahay dalka Albania warka kutabisay iyada oo aan dhar wadanin loona jeedo cowradeeda, kolkii hore wariyaha ayaa wadatay Shaati, kaas galuusaha ufurnaa oo ugu danbeyn ay iska saartay.
5. Wiilkii lagu magacaabi jiray Prince Charles Iyo xaaskiisii Diana Oo kadhashay qoys boqortooyo ayaa Arooskoodu kubaxay lacag dhan $110 million, waana arooskii ugu lacagta badanaa abid ee aduunka qof aadami ah dhigto, ilaa maantana majiro qof iskoorkaas jabiyay.
Fadlan inta aadan kabixin, Like saar boggan, si aad u hesho warbixinadan oo kle, Share dheh, soo qor qodobkii kuugu so jiidashada badnaa.
Qoraalkan cidna ma qaadan karto Xigasho la’aan.
W/T:- Abdirashid Alifoow
Previous articleOdaygan wuxuu dhashay Dalka Sudan Waxaana qabsatay Arin yaab leh
Next article5ta Caadi dhaqameed ee ugu yaabka badan Caalamka, xilliga #Arooska.
dhageyso:- Mid kamid ah shacabka rer jubbaland oo cabasho ka muujiyay...
Ahlusuna Waljameeca oo kulna degdeg ka leh go’aanka ka soo baxay...
Wadada Makkah Almukarama oo Dib loo Furay
Dhageyso:- Mid ah Beelaha Degan Galmudug oo ka Cabaneeysa Boob Siyaasadeeysan...
Aadan barre Ducaale oo kismaayo ka sheegay fariin ay Usoo...
Nabadoon ka mid ahaa Ergadii Soo Xushay Xildhibaanada Qaranka oo La...
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad xasaasi ah ka jeediyay Addis Ababa